Bulldozer track |
Tevera kusangana kwebulldozer
Yakazara undercarriage zvikamu zvekuchera uye bulldozer zviripo: track roller / yepasi roller / yakaderera roller, idler yekumberi, sprocket rim / chikamu boka, mutakuri roller / yepamusoro roller, track cheni ine shangu/track boka.
1.The track group ine shangu iri kuburikidza nekudzima-kudzimisa maitiro kuvimbisa yakanakisa michina zvivakwa, simba repamusoro uye yepamusoro yekupfeka kusamira kune kukotama uye kuputsika.
2.Kuomarara kwepamusoro kweboka rema track neshangu iHRC50-60 yekudzikisira kupfeka uye hupenyu hurefu, kuwedzera kukosha kune zvigadzirwa zvako kune bhizinesi rako nekuwedzera kusimba kwezvigadzirwa zvako.
3. The track group ine shangu dzine dhizaini chaiyo, yakanyatsogadzirwa kugadzirisa kwakaringana nyore grousing inorema inoremerwa kugona kusvika ku50tons pasina kukanganisa kushanda kwakanaka kwevacheri vakavimbika mhando, mutengo wepamusoro, mabasa emhando.
THE MODELS YEKU EXCAVATOR/BULLDOZER
Zvakapfuura: Pombi yegiya
Zvinotevera: SWMC-Hombe mhete giya